बन्दुकधारी तालिवानीको बिचमा कसरी भने पत्रकारले समाचार ? (भिडियो सहित) - प्रभात खबर
बन्दुकधारी तालिवानीको बिचमा कसरी भने पत्रकारले समाचार ? (भिडियो सहित)
२०७८ भाद्र १५, मंगलवार १४:४८
एजेन्सी- अफगानका टेलिभिजन समाचारवाचकले तालिबान लडाकूको बीचमा हेडलाइन पढ्दै गर्दा उनी निकै आत्तिएको देख्न सकिन्छ । तर यतिबेला उनले अफगानी जनतालाई भने नआत्तिन भने । बन्दुक बोकेका तालिबानी लडाकूको बीचमा बसेर समाचार पढिरहेको भिडियो क्लिप टिभी स्टुडियोले अनलाइनमा सेयर गरेका छन् । तालिबानी लडाकू स्टुडियोको भवनमा प्रवेश गरेको र समाचारवाचकलाई तालिबानको प्रशंसा गर्न अह्राएको डेलीमेल बताएको छ ।
बीबीसीका याल्दा हाकिमले आइतबार उक्त भिडियो राख्दै ट्वीट गर्दैै लेखेका छन्, ‘अफगानिस्तान टिभी– वास्तविकता । ‘हालको राजनीतिक बहस अफगान टिभीमा जस्तो देखिन्छ, तालिबानका लडाकू टिभी प्रस्तोतामाथि निगरानी गर्दै । ‘टिभीका प्रस्तोताले गानी सरकार ढलेको र इस्लामिक इमिरेट्सले अफगानी जनतालाई नडराउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । ’
४२ सेकेन्डको क्लिपलाई १० लाख बढीले हेरिसकेका छन् । उक्त भिडियोमा आठ हतियारधारी लडाकूले उनलाई घेरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
तालिबानी लडाकू आइतबार टिभी स्टुडियोको भवनभित्र प्रवेश गरेको र कार्यक्रम प्रस्तोतालाई उनको अगाडि नै बोल्न माग गरेको बताइन्छ । पर्दाज नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा प्रस्तोताले समूहलाई सहयोग गरिदिन पनि मानिसमाझ अपिल गरेका छन् । न्यूजरुम भित्रको फुटेज सेयर गर्दै एटिलात्रोज र काबुलनाउका प्रकाशक जाकी दार्याबीले ट्वीटरमा लेखे, ‘यो एउटा यस्तो चिज हो जसलाई एटिलात्रोजले कुनै पनि हालतमा सहन सक्दैन ।’
‘यस्तो भए हामीले बरु काम नै बन्द गरिदिनेछौं । इरानी पत्रकार मासिह अलिनेजाडले उक्त भिडियो रिट्वीट गर्दै लेखे, ‘यो वास्तविक दृश्य हो ।’
‘तालिबानी लडाकू यी डराइरहेका टिभी प्रस्तोताको पछाडि बन्दुक लिएर पोज दिइरहेका छन् र अफगानिस्तानका जनता इस्लामिक इमिरेट्ससँग डराउनु पर्दैन भनेर उनलाई भन्न लगाइरहेका छन् । ‘तालिबान आफैंमा लाखौं मानिसहरुका लागि डरको पर्याय हुन् । यो अर्को एउटा प्रमाण हो ।’